﻿﻿	မျိုးပွားမှုအသိအမြင် | Find My Method
မျိုးပွားမှုအသိအမြင်အခြေခံတဲ့နည်းလမ်းများဟာ စျေးမကြီးပါ။ သူတို့ဟာ ဟိုမုန်းကင်းပါတယ်။
ထိ‌ရောက်မှု – မျိုးပွားမှုအသိအမြင်နည်းလမ်းများဟာ သိပ်တော့မထိရောက်လှပါ။ အတိအကျကျင့်သုံးမှသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး – မရှိ
အားထုတ်ရမှု- မြင့်မားသော။ မျိုးပွားမှုအသိအမြင်အခြေခံတဲ့နည်းလမ်းများကို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးဖို့ရာ နေ့စဉ်ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။
မျိုးပွားမှုအသိအမြင်အခြေခံတဲ့နည်းလမ်းများဟာ သဘာဝမိသားစုစီမံကိန်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေ့တွေကိုဆုံးဖြတ်ရန် သင့်ရာသီလာမှုစက်ဝန်းကို ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အခက်အခဲဆုံးအပိုင်းကတော့ အဲဒီနေ့တွေဟာ ဘယ်နေ့တွေလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မျိုးပွားမှုကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေ့တွေကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ကူညီဖို့ ကျွန်ုပ်တို့သင့်ကို ရွေးစရာ အနည်းငယ် ပေးထားပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်များအပါအ၀င် ရာသီလာချိန် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဒါဟာ အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်ခွင့်မဟုတ်ပါ။ 
Standard Days စံနေ့ရက်များ (SDM) – အကယ်၍ သင့်ရာသီလာခြင်းသံသရာဟာ ၂၆ ရက်မှ ၃၂ ရက်အကြားရှိရင် ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရာသီလာချိန်များကိုမှတ်သားထားဖို့ နဲ့ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်တဲ့နေ့တွေကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
TwoDay (TDM) – ဒီနည်းလမ်းအတွက် သင်မျိုးပွားချိန်ကိုသိဖို့ သားအိမ်ခေါင်းကအရည်ကို လေ့လာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းအချွဲ – သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သင်မျိုးပွားနိုင်ဆုံး အချိန်မှာ ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုလုပ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကတော့ သင့်သားအိမ်ခေါင်းက အချွဲကို စောင့်ကြည့်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
Body Temp (BBT) – ဒီနည်းလမ်းအတွက် သင် မျိုးဥချပေးနေလား ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ မနက်တိုင်း သင့်ခန္တာကိုယ် အပူချိန်ကို လိုက်မှတ်ရပါတယ်။
Symptothermal: သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်မှာကိုပြသတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာများစွာရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သူတို့ထဲကအတော်များများကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းခြေရာခံကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ သင့်သားအိမ်ခေါင်းဝပွင်းလာတာကိုခံစားရတာ ပါဝင်ပါတယ်။
Lactational (LAM) – မိခင်နို့တိုက်ခြင်းဟာ မျိုးပွားမှုကို သဘာဝကျကျဖိနှိပ်စေပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သင်ကလေးမွေးပြီးခါစအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းလမ်းအလုပ်ဖြစ်ဖို့ သင့်ကလေးကို မိခင်နို့ချည်းသာတိုက်နေဖို့လိုပါတယ်။
သင်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုသိကျွမ်းရန်လိုသည်။ မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရန် မျိုးပွားမှုအသိအမြင်နည်းလမ်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုမိုသိစေတဲ့ နည်းကောင်းတွေလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲတွေကိုသတိထားမိလာပြီး သင့်ရာသီသံသရာကိုပိုနားလည်လာပါမယ်။
သင်ကိုယ်ဝန်ရရန်စိတ်မပူရပါ။ ဒီနည်းလမ်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးရင်တော့ မအောင်မြင်တဲ့နှုန်းတွေ မြင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ရာပြဿနာဖြစ်နိုင်ပြီး မျိုးပွားမှုအသိအမြင်နဲ့စောင့်ကြည့်ခြေရာခံဖို့ ညံ့ဖျင်းမယ်ဆိုပါက တခြားနည်းလမ်းကို ရွေးပါ။ သင်လေ့လာနေစဥ်မှာ စမ်းသုံးကြည့်ချင်ရင် လိင်ဆက်ဆံတိုင်းမှာ ကွန်ဒုံးလို အရန်နည်းကိုသုံးပါ။
မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်းအပြည့်အဝထားခြင်း သင်ရော သင့်အဖော်ပါ နှစ်ဦးစလုံး ဒီနည်းလမ်းကိုလိုက်နာဖို့သဘောတူရပါမယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
လိင်မဆက်ဆံပဲ ဒါမှမဟုတ် အခြားနည်းတစ်ခုကိုသုံးဖို့ အဆင်ပြေရပါမယ်။ ဒီနည်းလမ်းမှာ လတိုင်း ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေ့တွေကို ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီရက်တွေမှာ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဟိုမုန်းမပါတဲ့မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့နည်းတစ်ခုကိုသုံးဖို့ လိုပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရှောင်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ဟိုမုန်းမပါတဲ့ မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့နည်းတစ်ခုကိုသုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုပါက မျိုးပွားမှုအသိအမြင်အခြေခံတဲ့ နည်းလမ်းများကိုမသုံးပါနဲ့။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကို သင်လိုချင်သည်။ ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဟိုမုန်းအပိုတွေမပေးပါ။ ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးသူများဟာ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသက်ရောက်မှုမရှိတာကို လိုချင်ကြတယ်။
ဆေးညွှန်းမလိုပါ။ ဟိုမုန်းတွေကိုမသုံးချင်ပါက ဒါဟာ ရွေးချယ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးပွားမှုအသိအမြင်အခြေခံတဲ့ နည်းလမ်းများဟာ ရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်ရာသီစက်ဝန်းကိုခြေရာခံကြည့်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေ့တွေမှာ လိင်ဆက်ဆံမှုမပြုရပါ။ အဲဒီရက်တွေမှာလိင်ဆက်ဆံပါက အမျိုးသား(သို့)အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး ဒါမှမဟုတ် diaphragmအမြှေးပြားလို အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုသုံးပါ။
နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သင့်ရာသီစက်ဝန်းကို ခြေရာခံကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်မျိုး သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးထက်ပိုသုံးခြင်းက သင့်အားပိုမိုတိကျအောင် ကူညီလိမ့်မည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲများကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီး ရာသီစက်ဝန်းရဲ့ ဘယ်နေရာမှာရှိနေသည်ကို တွက်ချက်ဖို့လိုပါမည်။ အတော် အားထုတ်ဖို့နဲ့ လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးခင်မှာ သင်ဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို နားလည်နေအောင် လုပ်ထားပါ။ လတိုင်း ၇ရက် လိင်မဆက်ဆံပဲ (သို့) အခြားနည်းတစ်ခုကိုသုံးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါစေ။ 
စံနေ့ရက်များနည်းလမ်း။ သင့်ရာသီစက်ဝန်းဟာ ၂၆ ရက်မှ ၃၂ ရက်အကြားရှိမှသာ ဒီနည်းနဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါမည်။ ဒီနည်းလမ်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
TwoDay နည်းလမ်း။ သားအိမ်ခေါင်းမှာအချွဲများစစ်ထုတ်နေပြီးလားဆိုတာ သိဖို့ နေ့တိုင်းစစ်ဆေးရပါမယ်။ အချွဲစစ်ထုတ်လာတာသတိထားမိပါက မနေ့က ဒါမှမဟုတ် ထိုနေ့မှာ သင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီရက်တွေမှာ လိင်မဆက်ဆံပါနဲ့။ လိင်ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် တခြားမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုခုသုံးပါ။ ဤနေရာတွင် သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရယူပါ။
သားအိမ်ခေါင်းအချွဲ နည်းလမ်း သားအိမ်ခေါင်းမှာအချွဲကို နေ့တိုင်းစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ အချွဲစစ်ထုတ်လာတဲ့အချိန်ကစလို့ (သားအိမ်ခေါင်းအချွဲဟာ ကြည်ချောပြီး အမြှင်တန်းစိုစွတ်နေရင်) နောက်၃ရက်အကြာရပ်သည်အထိ သင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းလမ်းကို Symptothermal Method (သို့) Standard Days method ဖြင့်သုံးပါ။
ခန္ဓာကိုယ် အခြေခံ အပူချိန်နည်းလမ်း (BBT) ။ မနက်တိုင်း သင်မတ်တပ်မရပ်မီ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းရပါမည်။ ၎င်းကိုဇယားပေါ်ရေးချထားပါ။ ဤနည်းလမ်းကို Symptothermal Method (သို့) Standard Days Method ဖြင့်သုံးပါ။
Symptothermal နည်းလမ်း။ ဒီနည်းလမ်းမှာ သင်ကိုယ်ဝန်ရနိုင်မည့်နေ့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် မျိုးပွားမှုအသိပညာအခြေပြုနည်းလမ်းများပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နဲ့ သားအိမ်ခေါင်းအချွဲကို ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် သတင်းအချက်အလက်ပိုမိုရယူနိုင်ပါသည်။
Lactational Amenhorrea နည်းလမ်း။ ကလေးရှိပြီးနောက် ၆ လအထိကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်ရန် မိခင်နို့တိုက်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အောက်ပါ စံသတ်မှတ်ချက်သုံးချက်ကိုက်ညီမှသာ ဒီနည်းကအလုပ်ဖြစ်ပါမည်။
ကလေးကို (အခြားအစားအစာများ(သို့)အရည်များမပါ) မိခင်နို့သာတိုက်ကျွေးသည် ။
သင့်ကလေးကို နေ့ပိုင်းတွင် ၄နာရီခြား ညဖက်၆နာရီခြားတိုင်း နို့တိုက်သည်။
သင်ဒီမှာ LAM အကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
လူတိုင်းသည် မတူညီပါ။ သင်တွေ့ကြုံခံစားရသောအရာသည်အခြားအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်မတူနိုင်ပါ။
လုံးဝအခမဲ့ – Basal thermometer သို့မဟုတ် CycleBeads တို့၏စျေးနှုန်းမှအပ
ဟော်မုန်းမပါရှိသောကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက် စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေတစ်ခုတည်းသာ သင့်စိုးရိမ်ရမှာဖြစ်သည်။
ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်ကို ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းနဲ့ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန် ကူညီပေးသည်။
ရာသီစက်ဝန်းအတွင်း တစ်ပတ်အနည်းဆုံး ရှောင်နိုင်ဖို့ (ဒါမှမဟုတ် အခြားနည်းတစ်ခုသုံးဖို့) လိုအပ်သည်။
သင်ရော သင့်အဖော်ပါ ပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်။
ပြက္ခဒိန်နည်းလမ်းနှင့်ပုံမှန်နေ့ရက်များနည်းလမ်းသည် ပုံမှန်ရာသီမလာသည့်အမျိုးသမီးများအတွက် အသုံးမပြုနိုင်ပါ
သင်ဟာဟိုမုန်းပါတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုခုကိုသုံးတာ မကြာသေးခင်ကမှ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါက ဟိုမုန်းမပါတဲ့နည်းတစ်ခုကို လအနည်းငယ်သုံးဖို့လိုပါမယ်။ ဟိုမုန်းတွေဟာသင့်ရာသီစက်ဝန်းကိုသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ဒါဟာမျိုးပွားမှုအသိပညာအခြေပြုနည်းလမ်းတွေကို အစပိုင်းမှာ မထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရာသီသံသရာကိုခြေရာခံဖို့ လေ့လာနေတုန်းမှာ ဟိုမုန်းမပါတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို သုံးပါ။
သင် အရက်မူးနေပါက အစီအစဥ်တကျ လိုက်နာဖို့ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်
သင့်ကိုကူညီဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဒီမှာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ဒါကို မကြိုက်သေးဘူးလို့ခံစားရရင်၊ ကျွန်တော်တို့မှာအခြားနည်းလမ်းတွေအတွက် အကြံဥာဏ်တွေရှိပါတယ်။ သတိရလိုက်ပါ : နည်းလမ်းပြောင်းမယ်ဆိုရင် ပြောင်းနေတုန်းကို တခြားနည်းတစ်ခုခုသုံးဖို့ သေချာပါစေ။
နေ့မှားပြီး လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရင် ဘာြဖစ်မလဲ? 
ဒါဟာ လိင်ဆက်ဆံပြီး ၅ ရက်အတွင်းပဲရှိသေးပြီး သင် ကိုယ်ဝန်မရလိုပါက အရေးပေါ် သန္ဓေတားခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ၅ ရက်ကျော်သွားပြီးပါက သင့်ရာသီနောက်ကျနေလျှင် ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေ့တွေမှာ အကာအကွယ်မပါပဲ လိင်ဆက်ဆံလိုပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်လိုပါက ပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကို စဥ်းစားချင်ပါလိမ့်မည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တဲ့နေ့တွေကို ဆုံးဖြတ်ရတာခက်ခဲလျှင် IUD သို့မဟုတ် implant လို ပိုပြီးလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းကို စဥ်းစားချင်ပါလိမ့်မည်။
ဟိုမုန်းမပါတဲ့ မျိုးပွားမှုအသိပညာဘက်အပိုင်းကို နှစ်သက်ပါသလား ParaGard IUD ဒါမှမဟုတ် ကွန်ဒုံးလို ခြားခံပါတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို သုံးဖို့ စစ်ဆေးပါ။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-အတွင်းသုံးကွန်ဒုံး၊ implant၊ IUD၊ ကွန်ဒုံး
နေ့တိုင်း ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းဖို့၊ ရာသီလာတာခြေရာခံစောင့်ကြည့်ဖို့၊ အချွဲစစ်ဆေးဖို့ သတိမရရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ? 
ဒီနည်းလမ်းဟာ အဲဒါတွေကို မှန်မှန် တသမတ်တည်း သုံးဖို့ စိတ်ပါလက်ပါရှိမှသာလျှင် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Appတွေ အပူတိုင်းကရိယာတွေ ရာသီကို မှတ်သားစောင့်ကြည့်ရာမှာကူညီပေးတဲ့ cycle beadsလို ပစ္စည်းကရိယာတွေ ရှိပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ နေ့စဥ်တိုင်း မျိုးပွားတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ မသေချာနိုင်ပါက အားထုတ်ရမှုသိပ်မလိုတဲ့ အခြားနည်းလမ်းအတွက် စဥ်းစားရပါမယ်။
IUD သို့မဟုတ် implant ဟာ နှစ်နဲ့ချီပြီးကောင်းတယ်၊ ဆေးထိုးတာက လပိုင်းအတွက်၊ အဝိုင်းကွင်းက လစဥ်လဲဖို့ နဲ့ ကပ်ခွာပြားကိုအပတ်စဥ်လဲရပါမယ်။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-IUD၊ ကပ်ခွာပြား၊ အဝိုင်းကွင်၊ ထိုးဆေး